Dalab ka dhan ah ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya oo la gudbiyey
Codsigaan ayaa la xiriira ka hortagga faafitaanka fayruska sida fudud u faafa ee Corona.
NAIROBI, Kenya – Isbaheysiga Thirdway ee Kenya ayaa ku dhawaaqay in baarlamamaanka Kenya uu meelmariyey sharci xeerinaya in ciidamadda dalkaas ka jooga Soomaaliya lasoo saaro si ay ula tacaalaan Covid-19.
Siyaasiga Ekuru Aukot ayaa hogaamiya isbaheysiga, kaasoo Isniintii, 30-ka Maaj sanadkan 2020, u gudbiyey baarlamaanka codsi ku aadan talaabooyin horleh oo wadankaas kula dagaalamayo Coronavirus.
Talaabooyinka ayay soo jeediyeen in lagu daro qorsheyaasha maamulka madaxweyne Uhuru Kenyatta uga jawaabayo fayruska.
Sidda ku xusan dalabkooda, qodobada ay miiska saareen waxaa kamid ah in dib loogu yeero ciidamada Kenya ee kamid ah howlgalka AMISOM si ay u ilaaliyaan Isbitaalada lagu daaweynayo bukaanada cudurka faafa.
Sidoo kale, waxay ku baaqeen in wadahadalada ay Kenya ciidankeeda ugala baxayso Soomaaliya lagu daro qodob sheegay in Midowga Afrika uu hada kadib u diro Soomaaliya ciidamada dalalka aan xuduudka la lahayn.
Xisbiga ayaa ku doodey in soo celinta ciidamada ay dib-u-heleyso 20 bilyan oo lacagta Kenya ah, taas oo haatan uga baxda howlaha askarta.
Lacagtaas waxay xuseen in qeyb ay ka noqon karto ololaha lagula tacaalayo xanuunka safmarka ah, kaasoo soo ritay in ka badan 80 qof oo ku sugan gudaha Kenya isla markaana ay u dhinteen laba ruux.
Ciidamada Kenya ayaa soo galay Soomaaliya sanadkii 2011-kii si ay nabad-gelyadda dalkooda uga difaacaan mitidiinta Al-Shabaab.
Siyaasiyiinta iyo qaar kamid ah dadweynaha Kenya ayaa tan iyo xiligaas waday olole ay ku doonayaan in ciidamadooda looga saaro Soomaaliya kadib markii ay Shabaab gudaha dalkaas ka fulisay weeraro galaaftay dad badan.
Kenya oo diiwaan-gelisay qofkii ugu horeeyay oo u dhintay fayruska
Afrika 26.03.2020. 20:06
Bukaanka ayaa waxaa la tilmaamay in uu horey u qabay cudurka Sonkorta.
Soomaliya 23.03.2020. 12:50
Jabuuti oo xaqiijisay kiiskii ugu horeeyay ee caabuqa Coronavirus
Afrika 18.03.2020. 13:10
Wasiiradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Kenya oo kulmay
Soomaliya 11.03.2020. 20:12
Go'aan laga soo saarey dacwad lagu soo oogo xubno la kulmay Farmaajo
Afrika 03.03.2020. 06:40
Janan oo ka jawaabay baaqa hub ka dhigista ee maamulka Mandera
Soomaliya 10.02.2020. 16:25